မေတ္တာတရား- စိတ်ခံစားမှုနှင့် ဉာဏ်အကြား (ကော်လံ ၂၂) - အရှင်ဘုရား Michael Avraham
အချစ်နှင့် စိတ်ခံစားချက်ကြား (ကော်လံ 22)
16 မှတ်ချက်များ	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 26 / 06 / 2019
ဤအပတ်၏ Torah အပိုင်းတွင် (ကျွန်ုပ်တောင်းပန်သည်) parsha သည် "သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုချစ်လော့" သည်သခင်ဘုရားကိုချစ်ရန်ပညတ်တော်နှင့်ပတ်သက်သော Shema ကိုရွတ်ဆိုခြင်းမှပေါ်လာသည်။ ယနေ့ဖုန်းခေါ်သံကိုကြားသောအခါ၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတိတ်တွင်ရှိခဲ့သော အတွေးအချို့ကို သတိရပြီး ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အချို့ကို ထက်မြက်စေပါသည်။
ယေရုဟမ်မြို့ရှိ Yeshiva တွင် သင်ကြားပို့ချသောအခါတွင် စိတ်ခံစားမှု (နှလုံးသား) သို့မဟုတ် စိတ်၏နောက်သို့ လိုက်ရန် လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်း မေးမြန်းသော ကျောင်းသားများ ရှိခဲ့သည်။ စိတ်၏နောက်မှသာလျှင် စိတ်သည် နှလုံး၌ ခံစားရသောအရာ (စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှု၊ ဓာတုဗေဒ၊ အဖော်တို့နှင့်) ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် ဟု ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ နယ်ပယ်အားလုံးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် လိုအပ်ပြီး နှလုံးသား၏အလုပ်မှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော်လည်း မဆုံးဖြတ်ဘဲ ထားရန်ဖြစ်သည်။ ဒီအတွက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်း နှစ်ခုရှိပါတယ်၊ တစ်ခုက နည်းပညာပိုင်းပါ။ နှလုံးသွင်းပြီးနောက် လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် မှားယွင်းသောရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စိတ်ခံစားမှုသည် ကိစ္စတစ်ခုတွင် တစ်ခုတည်းသော သို့မဟုတ် အရေးအကြီးဆုံးအချက်မဟုတ်ပေ။ စိတ်သည် နှလုံးသားထက် မျှတသည်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ သိသိသာသာပါပဲ။ မင်း ဇက်ကို လွှဲပေးရင် မင်းတကယ် မဆုံးဖြတ်ဘူး။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု (သို့မဟုတ် စေတနာအလျောက်)၊ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ အဆုံးအဖြတ်ကို ဉာဏ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်၍ စိတ်ခံစားမှုသည် ငါ၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်၊ တကယ်တော့ နှလုံးသားရဲ့နောက်မှာ လမ်းလျှောက်တာဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ပေမယ့် အခြေအနေတွေက သင့်ကို ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သူတို့ကို ဆွဲငင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။
ယခုအချိန်အထိ ယူဆချက်မှာ အချစ်သည် နှလုံးသားရေးရာဖြစ်သော်လည်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှသာမဟုတ်ပေ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း စိတ်ခံစားမှုသည် အကြောင်းရင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ပုံတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပင်လျှင် စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်၊ ၎င်းတွင် အဓိကအရာပင်မဟုတ်ပေ။
ယာကုပ်သည် ရာခေလအတွက် ခုနစ်နှစ်ကြာ အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ “ထိုမိန်းမကို ချစ်သောစိတ်သည် ရက်ပိုင်းအနည်းငယ်မျှသာ သူ့မျက်စိ၌ ရှိလိမ့်မည်” (ကမ္ဘာဦး ၂၆း၂၀)။ ဤဖော်ပြချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သာမန်အတွေ့အကြုံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပုံရသည်ဟူသော မေးခွန်းကို သိရှိပါသည်။ များသောအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး သူ့ကို စောင့်မျှော်နေသည့်အခါ နေ့ရက်တိုင်းသည် ထာဝရကာလတစ်ခုလို ထင်ရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သူ၏ ခုနစ်နှစ်တာ အမှုတော်ထမ်းဆောင်မှုသည် ရက်အနည်းငယ်ကြာပုံပေါက်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်ကိုယ်စိတ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်သည် ရာခေလကို မိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ ချစ်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ယေဘုယျအားဖြင့် ရှင်းပြသည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို ချစ်မြတ်နိုးသူ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကို သူ့ကိုယ်သူ လိုလားတောင့်တသူသည် အမှန်တကယ်တွင် သူ့ကိုယ်သူ ဗဟိုပြုသည်။ ပြည့်စုံရန် လိုအပ်သော သူ၏ စိတ်ဝင်စားမှုသည် ဖြစ်သောကြောင့် သူအနိုင်ရသည်အထိ စောင့်ရန် ခက်ခဲသည်။ သူ့အဖော်မဟုတ်ဘဲ သူ့ကိုယ်သူ ချစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က သူ့လက်တွဲဖော်ကို ချစ်ပြီး သူ့အတွက်မဟုတ်ဘဲ သူ့အတွက်လုပ်ပေးလိုက်ရင်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကတောင် သူ့အတွက် သေးငယ်တဲ့ဈေးလို့ ထင်ရပါတယ်။
Don Yehuda Abarbanel သည် သူ၏ Conversations on Love စာအုပ်တွင် ဖြစ်သလို စပိန်တွေးခေါ်ပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးသမားနှင့် သတင်းထောက် Jose Ortega i Gast က သူ၏ Five Essays on Love စာအုပ်တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် တပ်မက်ခြင်းတို့ကို ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နှစ်ဦးစလုံးက ရှင်းပြပြီး ၎င်း၏စွမ်းအား၏မြှားသည် လူကို အပြင်သို့မျက်နှာမူစေသည်ဟု ရှင်းပြသည်။ တပ်မက်မှုဟူသည် အာရုံစူးစိုက်မှုသဘော ဖြစ်သော်လည်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ စွမ်းအားမြှားသည် အပြင်မှ အတွင်းဘက်သို့ လှည့်သည်။ အလယ်၌ နေသောသူသည် ချစ်အပ် မြတ်နိုးအပ်၏၊ အလယ်၌ရှိသော သူသည် တပ်မက်မှု (တပ်မက်မှု) တပ်မက်မှု ဖြစ်၏။ သူသည် မိမိအတွက် ချစ်သူကို အနိုင်ယူလိုသည် ။ ဒီအကြောင်းကို ငါတို့ ကင်းထောက်တွေက ပြောထားပြီးသား (အဲဒီမှာ) တံငါသည်က ငါးကို ချစ်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဆို သူဘာလို့စားနေတာလဲ။
ဤအသုံးအနှုန်းတွင် ယာကုပ်သည် ရာခေလကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ရာခေလကို မတပ်မက်ခဲ့ဟု ဆိုနိုင်သည်။ တဏှာဟူသည် တဏှာဟူသည်ကား တဏှာသည် မိမိအလိုရှိအပ်ကုန်သော အခြားအရာကို စွန့်စေလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရန် မစောင့်နိုင်ပေ။ နေ့ရက်တိုင်းသည် သူ့အတွက် ထာဝရကာလတစ်ခုလိုပင်။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူက တခြားသူ (ချစ်ရတဲ့သူကို) ပေးချင်တာကြောင့် အဲဒါဖြစ်ဖို့အတွက် လိုအပ်ရင် နှစ်နဲ့ချီပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။
ဤထူးခြားချက်တွင် အခြားသောအတိုင်းအတာကို ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ အချစ်၏နိုးထမှုအတွက် ဒဏ္ဍာရီလာဒဏ္ဍာရီအလင်္ကာသည် ချစ်သူ၏နှလုံးသားထဲတွင် တွယ်ကပ်နေသော Cupid ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖြစ်သည်။ ဤအလင်္ကာသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြင်ပအချက်အချို့ကြောင့် ချစ်သူ၏စိတ်နှလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဒါမှမဟုတ် စီရင်ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ဤဖော်ပြချက်သည် ချစ်ခြင်းထက် မက်မောခြင်းအတွက် ပိုသင့်တော်ပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ပို၍ ကြီးမားပြီး အလိုလိုသိသာသော အရာတစ်ခုရှိသည်။ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဥ်းများ မရှိဘဲ၊ သမ္မာသတိမရှိဘဲ သူ့အလိုလို ပေါ်ပေါက်လာလျှင်ပင်၊ ၎င်းသည် ငုပ်လျှိုးနေသော သမ္မာသတိ၊ သို့မဟုတ် နိုးထလာချိန်မတိုင်မီက စိတ်နှင့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါဖန်တီးထားတဲ့ စိတ်ဟာ ငါပုံဖော်တဲ့ပုံစံကြောင့် နိုးထလာတယ်။ ထို့ကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တပ်မက်မှု နှင့် မတူဘဲ သမ္မာသတိနှင့် လိုချင်တပ်မက်မှု အတိုင်းအတာ ရှိပြီး ငါ့ထံမှ အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ခံစားမှုမျှသာ မဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ- စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ဉာဏ်
Maimonides သည် သူ၏စာအုပ်တွင် နေရာနှစ်နေရာဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း ရေးသားထားသည်။ Torah ၏အခြေခံနိယာမများတွင်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားများနှင့်၎င်းတို့၏ဆင်းသက်လာမှုအားလုံး၏နိယာမများကိုဆွေးနွေးထားပြီးနောင်တတရားဥပဒေများတွင်၎င်းတို့ကိုအတိုချုံးပြန်ဆိုသည် (နောင်တတရားဥပဒေများတွင်နောက်တဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားသောအခြားအကြောင်းအရာများကဲ့သို့) ။ တေရှူဝါကျမ်း၏ ဆယ်ခုမြောက် အခန်းကြီးအစတွင်၊ သူသည် သူ၏နာမအတွက် သခင်ဘုရား၏အမှုတော်နှင့် အခြားအရာများကို ရေးသားထားသည်။
တစ် ငါသည် Torah ၏ ပညတ်တော်များကို လိုက်နာပြီး ၎င်း၏ဉာဏ်ပညာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်၊ သို့မဟုတ် နောင်ကမ္ဘာ၏အသက်ကို ရနိုင်စေရန်နှင့် Torah သတိပေးခဲ့သည့် အပြစ်များမှ အနားယူရန် မည်သူမျှ မပြောစေနှင့်။ ဤနည်းဖြင့် ကျင့်သော ဤသူသည် ပရောဖက်များ၏ အကျင့်သီလမဟုတ်၊ ပညာရှိတို့၏ အကျင့်သီလမဟုတ်၊ ကြောက်ရွံ့သော အလုပ်ဖြစ်၏၊ ဘုရားသခင်သည် ဤနည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်တော်မမူပေ၊ တိုင်းသူပြည်သား ယောက်ျား မိန်းမငယ်တို့သာ ဖြစ်၏။ မေတ္တာတရားပွားများပြီး အလုပ်မလုပ်မချင်း အကြောက်တရားနဲ့ အလုပ်လုပ်တတ်အောင် ပညာပေးသူတွေ။
ခ မေတ္တာတရားကို ကျင့်သောသူသည် တိုရနှင့် မတ္တာတို့နှင့် ဆက်ဆံ၍ လောက၌ ဘာကိုမျှ မကြောက်၊ မကောင်းမှုကို မကြောက်ဘဲ ဉာဏ်ပညာလမ်းသို့ လျှောက်လှမ်း၍ ကောင်းသောအရာကို အမွေမခံရဘဲ သစ္စာတရားဖြစ်သောကြောင့် သစ္စာတရားနှင့် အဆုံးရှိသော ကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့် ကျင့်၏၊ ဤသီလသည် အလွန်ကြီးမြတ်သော သီလဖြစ်၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် ဖြစ်ရကား မြတ်စွာဘုရားသည် မောရှေအား ခေါ်ဆိုအပ်သော သီလဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူပြီး သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ချစ်တော်မူ၏၊ ယောက်ျားသည် ထာဝရဘုရားကို ချစ်သောအခါ၊ မှန်ကန်သောမေတ္တာသည် မက်ဇဟ်အားလုံးကို မေတ္တာနှင့် ချက်ခြင်းဖြစ်စေလိမ့်မည်။
Maimonides သည် ဤနေရာတွင် သူ၏စကားများတွင် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့် ၎င်း၏နာမတော် (ဆိုလိုသည်မှာ ပြင်ပအကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်) ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်၊ Halacha XNUMX တွင် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာတရားကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ အလွန်ဒဿနနှင့် အေးစက်သော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီး စိမ်းကားခြင်းပင်။ ဤနေရာတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ မရှိပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက သမ္မာတရားမို့ သမ္မာတရားပဲ၊ ဒါပဲ။ ထို့ကြောင့် Maimonides က ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပညာရှိတို့၏ သီလဖြစ်သည် (စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ခြင်းမဟုတ်) ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ဤအရာကို တစ်ခါတစ်ရံ “ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” ဟုခေါ်သည်။
ဤနေရာတွင်၊ အောက်ပါ ဟာလခဟ်၌ ချက်ခြင်း ဆန့်ကျင်ဘက် အပြည့်အစုံကို ရေးသားခဲ့သည်။
တတိယ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မည်ကဲ့သို့ သင့်လျော်သနည်းဟူမူ ထိုသူသည် Gd ကို အလွန်ပြင်းထန်၍ ပြင်းထန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို Gd ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် နှောင်ဖွဲ့ကာ အမြဲတစေ မှားယွင်းသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို စွဲလမ်းခြင်းမရှိဘဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ ဖျားနာခြင်းကဲ့သို့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လွဲမှားစေတတ်ပါသည်။ ထိုမိန်းမနှင့် သူသည် ဥပုသ်နေ့၌ ၎င်းကို အမြဲ မှားယွင်းစေသည် ဟူသော ဤအချိန်မှစ၍ သူ၏ ချစ်သူများ ၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ မိန့်မှာထားသည့်အတိုင်း အမြဲတမ်း မှားယွင်းနေလိမ့်မည်၊၊ ငါသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် ဖျားနာသည်ဖြစ်၍ ပုံဥပမာ၏ သီချင်းတိုင်းသည် ဤကိစ္စအတွက် ပုံဥပမာဖြစ်သည်။
ဤတွင် အချစ်သည် ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကဲ့သို့ပင် နွေးထွေးပြီး စိတ်ခံစားမှုရှိသော မိန်းမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဝတ္တုများနှင့် အထူးသဖြင့် သီချင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ချစ်သူသည် အချစ်ကြောင့် ဖျားနာပြီး အမြဲလိုလို အမှားအယွင်းများ ရှိတတ်ပါသည်။ သူမကို မည်သည့်အခိုက်အတန့်မျှ မနှောင့်ယှက်နိုင်ပေ။
ဤအရာအားလုံးသည် ယခင် ဟာလခဟ်တွင်ဖော်ပြထားသော အေးစက်သောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။ Maimonides စိတ်ရှုပ်နေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူအဲဒီမှာရေးခဲ့တဲ့စာကို မေ့နေသလား။ ၎င်းသည် သူ၏စာများတွင် မတူညီသောနေရာနှစ်ခုကြား သို့မဟုတ် Maimonides နှင့် Talmud တွင်ပြောထားသည်များကြားတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသော ကွဲလွဲမှုမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သတိပြုမိပါမည်။ ဤနေရာတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုံးဝကွဲပြားသော ဘာသာစကားများကို ပြောနိုင်သော အနီးကပ်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ဥပဒေနှစ်ခုရှိသည်။
ဖြည့်စွက်ကုဒ်ပြောင်းခြင်းတွင် အမြတ်အစွန်းပျက်ကွက်မှုကို သတိထားသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို သရုပ်ဖော်ရန်အတွက် ပုံဥပမာတစ်ခုကို သင်ယူဆောင်လာသောအခါ၊ ပုံဥပမာတွင် အသေးစိတ်အချက်များစွာပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် သတင်းစကားနှင့် ပုံဥပမာနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ပုံဥပမာက သင်ပေးလာတဲ့ အဓိကအချက်ကို ရှာပြီး ကျန်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ကျဉ်းမြောင်းစွာ မရေးသင့်ပါဘူး။ Halacha XNUMX ပါပုံဥပမာက ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုမဟုတ်ပေမယ့်၊ စိတ်နှလုံးထဲမှာ အမြဲမှားယွင်းနေပြီး အာရုံမပျံ့လွင့်စေဘူးလို့ ပြောလာတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပုံဥပမာသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ယောက်ျားတစ်ဦးကို ချစ်ခြင်းကဲ့သို့ ထာဝရတည်မြဲနေစေရန် သွန်သင်ပေးသော်လည်း ရိုမန်တစ်ဆန်သောအချစ်၏ စိတ်ခံစားမှုသဘောသဘာဝကို မဆိုလိုပါ။
နောင်တရခြင်း၊ အပြစ်ဖြေခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏ နမူနာ
ငါသည် ယေရုဟမ်မြို့၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကာလသို့ ခဏမျှ ပြန်သွားပါမည်။ အဲဒီမှာရှိစဉ်၊ Sde Boker ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အထက်တန်းကျောင်းက ကျွန်မကို ချဉ်းကပ်ပြီး အပြစ်ဖြေခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နောင်တဆယ်ရက်တာကာလအတွင်း ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စကားပြောခိုင်းပေမယ့် ဘာသာရေးနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်သူတို့ကို မေးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မှတ်ချက်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုဗင်က ရှိမုန်ကို ထိတယ်ဆိုပါစို့၊ သူ့မှာ သြတ္တပ္ပစိတ်တွေ ပြင်းပြနေတော့ သူ့ကို ချော့မော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နှလုံးသားထဲက တောင်းပန်ပြီး ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင် Levy သည် Shimon ကိုလည်း ရိုက်သည် (ရှီမွန်သည် အတန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်)၊ ထိုအတွက် သူနောင်တမရှိပေ။ သူ့နှလုံးသားက သူ့ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ခံစားချက်မရှိဘူး။ အဲဒါကို သူတကယ် ဂရုမစိုက်ဘူး။ သို့တိုင် သူသည် မကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုပြီး ရှိမုန်ကို နာကျင်စေကြောင်း သူသဘောပေါက်သောကြောင့် ခွင့်လွှတ်ပေးရန်လည်း သူကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန် ဂါဗြေလသည် ကံဆိုးသော ရှိမုန်ထံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ရုဗင်နှင့် လေဝိတို့၏ နှလုံးသားနက်နဲမှုများကို သူ့အား ထုတ်ဖော်ပြသသည်၊ သို့မဟုတ် ရုဗင်နှင့် လေဝိတို့၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ ဖြစ်ပျက်နေသည်များကို ရှိမုန်ကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သူဘာလုပ်သင့်လဲ။ ရုဗင်၏တောင်းပန်မှုကို သင်လက်ခံပါသလား။ Levy ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကရော ဘယ်လိုလဲ။ ဘယ်တောင်းဆိုချက်က ခွင့်လွှတ်ဖို့ ပိုထိုက်တန်လဲ။
အံ့သြစရာကောင်းတာက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေဟာ အတော်လေးကို ညီညွတ်ပါတယ်။ ရုဗင်၏တောင်းဆိုမှုသည် စစ်မှန်ပြီး ခွင့်လွှတ်ထိုက်သော်လည်း Levy သည် ကြောင်သူတော်ဖြစ်ပြီး ခွင့်လွှတ်ရန် အကြောင်းမရှိပါ။ တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ အခြေအနေက တော်တော်လေး ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲလို့ ကျွန်တော် ငြင်းခုံခဲ့တယ်။ ရုဗင်၏ တောင်းပန်မှုသည် သူ၏ ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြမှုကို ကျွေးမွေးရန် ရည်ရွယ်သည်။ သူသည် မိမိကိုယ်မိမိ (ဗဟိုပြု၍) မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက် (ဗိုက်နာခြင်းနှင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို သက်သာစေရန်) အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်သည်။ တစ်ဖက်တွင် Levy သည် ထူးထူးခြားခြား ဖြူစင်သော လုပ်ရပ်တစ်ခု ပြုလုပ်သည်။ သူ့တွင် ဝမ်းဗိုက် သို့မဟုတ် နှလုံးနာခြင်း မရှိသော်လည်း အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိကြောင်းနှင့် ဒဏ်ရာရရှိနေသည့် ရှိမုန်ကို ကျေနပ်စေရန်မှာ သူ့တာဝန်ဖြစ်သည်ကို သိရှိသောကြောင့် သူလိုအပ်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်ပြီး ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါက သားကောင်အတွက်မဟုတ်ဘဲ သူ့အတွက်မဟုတ်ဘဲ centrifugal လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
သူ့စိတ်ထဲတွင် လီဗိုင်း ဘာမှ မခံစားရသော်လည်း အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ ၎င်းသည် ရူဘင်နှင့် ကွဲပြားစွာ တည်ဆောက်ထားသည်။ သူ၏ amygdala (စာနာမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်) ပျက်စီးသွားသောကြောင့် သူ၏စိတ်ခံစားမှုစင်တာသည် ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်ခြင်းမရှိပါ။ ဘာဖြစ်သလဲ?! လူသား၏ မွေးရာပါဖွဲ့စည်းပုံသည် သူ့အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရား လေးစားမှုတွင် ပါဝင်သင့်သလား။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ရှီမွန်အတွက်သာ သူ့အား ဖြူစင်သော၊ စေတနာနှင့် ပို၍ပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြင့် ပြုမူနိုင်စေသည့် ဤဒဏ်ရာသည် အတိအကျဖြစ်သောကြောင့်၊ ထို့ကြောင့် သူသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံထိုက်ပါသည်။ 
အခြားရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ရူဘင်သည် အမှန်တကယ်ပင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးထံတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားချက်များနှင့် ဗီဇကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် သက်ရောက်သည်။
စိတ်ခံစားမှု (သို့) ရလဒ်အဖြစ်
အပြစ်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် နောင်တသည် လုပ်ရပ် သို့မဟုတ် လူတစ်ဦး၏ အကျင့်စာရိတ္တကို ပျက်ပြားစေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အကယ်၍ Levy သည် Shimon ကို မှန်ကန်သော (centrifugal) အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ကျေနပ်စေသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် သူ့အပေါ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရပါက၊ လုပ်ရပ်သည် ပြီးပြည့်စုံပြီး လုံးဝသန့်ရှင်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စိတ်ခံစားမှုမဟုတ်သရွေ့၊ ထိုအရာသည် သူ့အတွင်းမီးများကို ဖုံးအုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဒုက္ခရောက်နေသော ရှိမုန်အား ကုသပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ရပ်၏ အကြောင်းရင်း မဟုတ်ပါက စိတ်ခံစားမှု တည်ရှိနေခြင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရား အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်း တောင်းခံမှု လက်ခံခြင်းတို့ကို အနှောင့်အယှက် မပေးသင့်ပေ။ သာမန်လူတစ်ဦးတွင် ထိုသို့သော စိတ်ခံစားချက်ရှိသည် (Amygdala သည် ၎င်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်)။ ထို့ကြောင့် လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်းကို တားမြစ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အတိအကျပြောရသော် ဤစိတ်ခံစားမှုကြောင့် ဤနေရာ၌လည်း အရေးမကြီးပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုက်နာဘဲ သူ့ဘာသာသူ ပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့် (၎င်းသည် ဗီဇတစ်မျိုးဖြစ်သည်)။ ဗီဇသည် ကိုယ်ကျင့်တရားသမာဓိ သို့မဟုတ် အားနည်းချက်ကို ညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှု သို့မဟုတ် ဗီဇကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များမှ အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ စိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအတာသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိသော်လည်း တူညီသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ၎င်းသည် စာရိတ္တလေးမြတ်မှုအတွက်လည်း အရေးမကြီးပါ။ စိတ်ခံစားမှု၏ တည်ရှိမှုသည် ကျင့်ဝတ်တရား၏ အလှည့်အပြောင်းတွင် ကြားနေဟု ယူဆရမည်။
အကျင့်စာရိတ္တပြဿနာကို သိမြင်နားလည်ခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားမှုကို ဖန်တီးထားလျှင် ယင်းသည် ရုဗင်၏ အကျင့်စာရိတ္တကို ညွှန်ပြနေပါသည်။ တစ်ဖန်၊ amygdala နှင့်ငြိုငြင်သောလေဗိုင်းသည်ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားချက်ကိုမဖွံ့ဖြိုးဘဲ၊ မှန်ကန်သောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်ရုဗင်ထံမှကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။ သူနှင့် ရုဗင်ကြား ကွာခြားချက်မှာ ၎င်းတို့၏ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်သာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တို့၌သာ ဖြစ်သည်။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း၊ စိတ်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် ဘက်မလိုက်သောအမှန်တရားဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး၏ကိုယ်ကျင့်တရားကို လေးမြတ်မှုနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ။
အလားတူပင် Beading Dew ၏စာရေးဆရာသည် C:
ပြီးတော့ အဲဒီထဲမှာ ငါပြောခဲ့တာတွေက ငါတို့ရဲ့ သန့်ရှင်းသော Torah ကို လေ့လာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်သဘောထားလမ်းကနေ လူတချို့ပြောတာကို သတိရပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သူ့ရဲ့လေ့လာမှုကို နှစ်သက်တဲ့ သင်ယူသူဟာ Torah ကို လေ့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မိမိသင်ယူမှုကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသူမူကား၊ မိမိ၏သင်ယူမှုကိုသာမက အပျော်အပါး၌ပါ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တတ်၏။
တကယ်တော့ ဒါဟာ နာမည်ကြီး အမှားတစ်ခုပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ဤသည်မှာ Torah ကိုလေ့လာရန် ပညတ်တော်၏ အနှစ်သာရဖြစ်သောကြောင့်၊ လေ့လာမှု၌ ခြောက်ပါးပျော်ရွှင်ပြီး မြိန်ရေရှိရှိရန်၊ ထို့နောက် Torah ၏စကားများကို သူ၏အသွေး၌ တိမ်မြုပ်သွားစေသည်။ Torah ၏စကားများကို သူနှစ်သက်သောကြောင့်၊ သူသည် Torah ကို တွယ်တာလာသည်။ [Rashi Sanhedrin Noah ၏ မှတ်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ D.H. နှင့် ကော်]။
“အကြင်သူသည် ပညာကို နှစ်သက်၍ မွေ့လျော်၏”ဟု မှားယွင်းစွာ တွေးတောမိသော ဤတရားသည် အပျော်အပါးအတွက် မဟုတ်ဘဲ နိဗ္ဗာန်အကျိုးငှာ (= မိမိအကျိုးအတွက်) ဖြစ်သောကြောင့် သာသနာ့အကျိုးကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ထင်မြင်မိ၏။ ဒါပေမယ့် ဒါက အမှားတစ်ခုပါ။ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုသည် လုပ်ရပ်၏ ဘာသာရေးတန်ဖိုးကို မထိခိုက်စေပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါက အကြွေစေ့ရဲ့ တစ်ဖက်တည်းပဲ။ ထို့နောက် သူ့နောက်တစ်ဖက်ကို ထပ်ထည့်သည်။
မောဒိနသည် သင်ယူသူသည် မိဿဝကို ရည်စူး၍ လေ့လာခြင်း၌ မွေ့လျော်ခြင်းကြောင့်သာလျှင် ကျက်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုသည်ရှိသော် မုဿာကို မစားရခြင်း၏ အကြောင်းတည်း၊ အပျော်အပါးစားခြင်း၊ သူ​တို့​က ``သူ​သည်​မိ​မိ​၏​စိတ်​ပျက်​နေ​သော​သူ​၏​နာ​မည်​မှ​လွဲ​၍​အ​ဘယ်​အ​ရာ​၌​အ​ဘယ်​အ​ရာ​၌​အ​ဘယ်​အ​ခါ​မျှ​မ​စ​ကား​ပါ​ဟု​ပြော​ဆို​ကြ​၏။ ကာမဂုဏ်အလို့ငှါ သင်ယူ၍ နှစ်သက်အပ်ကုန်သော ပညာကို ဆည်းကပ်ခြင်း မည်၏၊
ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ကြည်နူးမှုသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် ၎င်းတို့ကို တွဲဆက်ထားသရွေ့ လုပ်ရပ်၏တန်ဖိုးကို နှောင့်ယှက်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် လူတစ်ဦးသည် အပျော်အပါး ရွှင်လန်းမှုဖြင့် သင်ယူပါက၊ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုအရာများသည် မိမိသင်ယူမှုအတွက် တွန်းအားများဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် မိမိအတွက်ကြောင့် မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒီမှာ "မှားတယ်" ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးအနှုန်းများတွင် လေ့လာမှုအား အာရုံစူးစိုက်မှုပုံစံဖြင့် မလုပ်ဆောင်သင့်ဟု မှားယွင်းစွာ တွေးတောခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ အမှားဟု ဆိုထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ သူတို့က လုံးဝမှန်တယ်။ သူတို့၏ အမှားမှာ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ တည်ရှိနေခြင်းသည် ဤအရာသည် အာရုံစူးစိုက်မှု လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ချက်ကို ညွှန်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်မလိုအပ်ပါဘူး။ တခါတရံ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုသည် သင်ယူခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ၎င်းအတွက် အကြောင်းပြချက်များ မပါဝင်ပေ။
ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့ ပြန်သွားရန်
အခုထိ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောက်ချက်ကတော့ အစမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံက မပြည့်စုံဘဲ အခြေအနေက ပိုရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ပါ။ အချစ် (ဗဟို) နဲ့ တပ်မက်မှု (centrifugal) ကို ပိုင်းခြားခဲ့တယ်။ ထို့နောက် စိတ်ခံစားမှုနှင့် ဉာဏမေတ္တာကို ပိုင်းခြားသိမြင်ခဲ့ပြီး၊ Maimonides သည် ဘုရားသခင်အား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းထက် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိမြင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်တွင် ဖော်ပြချက်သည် အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြနိုင်သည်။
အချစ်သည် စိတ်ခံစားမှုဖြစ်သောအခါ၊ ၎င်းတွင် centripetal dimension ရှိတတ်သည်။ လူတယောက်အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြင်းပြတဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားရတဲ့အခါ၊ အနိုင်ရဖို့ လုပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ကျမကို စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ခံစားချက်ကို ထောက်ခံပြီး ကျွန်ုပ်ခံစားရသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့တဲ့မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါသည်။ မေတ္တာနှင့် တပ်မက်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိနေသရွေ့ ၎င်းသည် လုပ်ဆောင်ချက်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှစ်ရပ်ပါရှိသည်။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူအတွက်သာမက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူအတွက်ပါ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာမပါဘဲ ဖြူစင်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သန့်စင်သော အာရုံစူးစိုက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ငါ့မှာ ချို့တဲ့မှု မရှိဘူး၊ ငါ သူတို့ကို ထောက်ပံ့ဖို့ ငါ့ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို တားဆီးမထားဘူး၊ ဒါပေမယ့် ချစ်ရတဲ့သူအတွက်ပဲ လုပ်တယ်။ ထို့ကြောင့် ဖြူစင်သောအချစ်သည် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် ပလပ်ဆန်သော ချစ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖန်တီးထားရင်၊ အဲဒါက နာကျင်စရာမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် အကြောင်းပြချက်နဲ့ လှုံ့ဆော်မှုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်သရွေ့တော့ အဲဒါက ရလဒ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မည်ကဲ့သို့ မိန့်ဆိုရမည်နည်းနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (ရွှင်လန်းမှုကို ချစ်ရန်နှင့် သူစိမ်းကို ချစ်ရန် ပညတ်တော်လည်း ရှိသည်)။ အချစ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဆိုရင် ငါ့အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ဒါဆို ချစ်ဖို့ ပညတ်က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ အချစ်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုသက်သက်မဟုတ်ပါက ၎င်းကို ပေါင်းစည်းရန် နေရာရှိပါသည်။
ဤအခြေအနေတွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် မုန်းတီးခြင်းကဲ့သို့သော စိတ်ခံစားမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပညတ်တော်များအားလုံးသည် စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်သို့ မပြောင်းလဲဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားကြောင်း ပြသနိုင်သော မှတ်ချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။  ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်၊ R. Yitzchak Hutner သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုချစ်ရန် ပညတ်တော်တွင်ပါ၀င်သောကြောင့် Maimonides သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အထွတ်အထွတ်တွင် ဟာဂရကိုချစ်ရန် ပညတ်ကိုမည်ကဲ့သို့ရေတွက်သနည်းဟု မေးသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာပါသည်။ ဟာဂရသည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့် ယုဒလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့် ချစ်ရမည်၊ ထို့ကြောင့် ဟာဂရကိုချစ်ရန် ပညတ်တော်မှာ အဘယ်အရာကို ထပ်လောင်းသနည်း။ ယုဒလူတိုင်းကိုချစ်သကဲ့သို့၊ သူစိမ်းကိုငါချစ်လျှင်၊ တပါးအမျိုးသားကိုချစ်ရမည်ဟူသောပညတ်ကို ငါမစောင့်။ ထို့ကြောင့် RIA က ဤနေရာတွင် ထပ်တူထပ်မျှမရှိပါ၊ mitzvah တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာနှင့် တည်ရှိမှုပုံစံရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ဟာဂရကို ချစ်ရန် ပညတ်သည် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုမဟုတ်ပေ။ ဒီလိုအကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့ သူ့ကိုချစ်ဖို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း ပါဝင်တယ်။ ဒါဟာ ငါ့ကိုယ်ငါ အလိုလို သွတ်သွင်းထားသင့်တဲ့ အချစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ mitzvos သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အယူခံဝင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားမှုကို မနှစ်သက်သောကြောင့် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အသင်းအတွက် ဘာမှမရှိပါ။
Chezal ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်သော တရားဒေသနာသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်အစုအဝေးကို ဖော်ပြသည်။ သခင်ဘုရား၏စတုတ္ထအခန်းငယ်အစတွင် Maimonides က ဤသို့ဆိုထားသော်လည်း၊
မိဿဝသည် ဖျားနာသူတို့ထံ သွားရောက်၍ ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းငှါ နှစ်သိမ့်စေကာ၊ သေလွန်သောသူတို့ကို ဆောင်သွား၍ သတို့သမီးကို ဆောင်ခဲ့ကာ ဧည့်သည်များနှင့်အတူ လိုက်ကာ သင်္ဂြိုဟ်လိုသမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးကာ ပခုံးပေါ်တွင် တင်ဆောင်ကာ ခြင်္သေ့ကို ရှေ့တော်၌ တင်ကာ၊ ညည်းတွားပြီး တူးဆွမြှုပ်နှံပြီး သတို့သမီးနဲ့ သတို့သား Shiur ၊ ဒီ matzah တွေအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ စကားတွေကနေ ထွက်လာတာတောင်မှ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်သလို၊ တခြားသူတွေ မင်းကို လုပ်စေချင်တဲ့ အရာတိုင်းကို မင်း၊ Torah နှင့် matzah တို့တွင် သူတို့၏ညီကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
တစ်ဖန် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ မိတ်သဟာယသည် စိတ်ခံစားမှုနှင့် မပတ်သက်ဘဲ ကုသိုလ်တရားတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ထင်ရသည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါရရှာကျမ်း၌ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်-
အချစ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် ဘာသာပြန်သည်။ Parashat Akev (နောက်အပတ်ဟုခေါ်သည်။ တရားဟောရာ ၁၁:၁) ပါရာရှတ်အာကယ်ပါ အခန်းငယ်များနှင့်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဘုရားသခင်၏ဘုရားသခင်ကို ချစ်၍ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို နေ့ရက်ကာလပတ်လုံး စောင့်ထိန်းရလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်၊ Sages များသည် လက်တွေ့ကျသောသက်ရောက်မှုများ (Brachot SA AB) နှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ parsha ရှိ အခန်းငယ်များကို တောင်းဆိုပါသည်။
ပြည်နယ်တိုင်းတွင် - Tanya, R. Eliezer က မင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးမှာ ပြောရင် မင်းရဲ့မြေတစ်ပြင်လုံးမှာ ဘာ့ကြောင့်ပြောသလဲ၊ မင်းရဲ့မြေတစ်ပြင်လုံးမှာပြောရင် မင်းမရှိရင် မင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးမှာ ဘာပြောစရာရှိလဲ၊ ကိုယ်ကို ချစ်ခင်သော သူသည် ဤအမှုကို မက်ဒဒ်၌ ပြောဆို၏။
အချစ်သည် အရာဝတ္ထုတစ်ခု သို့မဟုတ် ၎င်း၏ခေါင်းစဉ်များကို နှစ်သက်ပါသလား။
တွန်းလှည်းနှစ်စီးနှင့် ဒုတိယတံခါးရှိ မီးပုံးပျံစာအုပ်များတွင် အရာဝတ္ထုနှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ သို့မဟုတ် ခေါင်းစဉ်များကြားတွင် ကျွန်ုပ် ခွဲခြားထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရှေ့ရှိ စားပွဲသည် သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ခြေထောက်လေးချောင်း၊ အရပ်ရှည်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိသော၊ အညိုရောင်၊ အဝိုင်းနှင့် အခြားအရာများစွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့် စားပွဲက ဘာလဲ။ အချို့က ဇယားသည် ဤအင်္ဂါရပ်များစုစည်းမှုမှလွဲ၍ ဘာမှမဟုတ်ပါ (၎င်းသည် ဒဿနပညာရှင် Leibniz ၏ ယူဆချက်ဖြစ်နိုင်သည်)။ ကျွန်တော့်စာအုပ်ထဲမှာတော့ ဒါက မမှန်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဇယားသည် အင်္ဂါရပ်များ စုစည်းမှုမှတပါး အခြားအရာဖြစ်သည်။ သူ့မှာ အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်တယ်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် သူ၏စရိုက်များဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် ဂုဏ်သတ္တိများစုစည်းမှုမှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါက၊ ဂုဏ်သတ္တိများစုစည်းမှုမှ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် အတားအဆီးမရှိပေ။  ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘေးရှိ စားပွဲ၏စတုရန်းလေးပုံပါသော လူတစ်ဦး၏လက်ချောင်းပေါ်ရှိ ကျောက်စိမ်းတုံး၏ အသီးအရွက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အထက်တွင်ရှိသော cumulonimbus တိမ်တိုက်များ၏ လေဝင်လေထွက်သည်လည်း တရား၀င်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? အကြောင်းမှာ ဤဂုဏ်သတ္တိများ ပြည့်စုံသော အရာဝတ္ထု မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော အရာဝတ္ထုများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော် အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် ဂုဏ်သတ္တိများ အစုအဝေးမှလွဲ၍ ဘာမှမဟုတ်ပါက၊ ထိုသို့ပြောရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ နိဂုံးချုပ်ချက်မှာ အရာဝတ္တုသည် ဂုဏ်သတ္တိများ အစုအဝေး မဟုတ်ကြောင်း နိဂုံးချုပ်ပါသည်။ ၎င်းကိုထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များစုစည်းမှုရှိသည်။
ဇယားကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုတစ်ခုအကြောင်းပြောသမျှ နီးပါးသည် ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများအကြောင်း ဖော်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ အညိုရောင် သို့မဟုတ် သစ်သား သို့မဟုတ် အရပ်ရှည်သည် သို့မဟုတ် သက်တောင့်သက်သာရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။ ဇယားများကိုယ်တိုင် (၎င်း၏အရိုးများ) ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အဲဒီလို ပြောဆိုချက်တွေ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဇယားတည်ရှိကြောင်းဖော်ပြချက်။ ဖြစ်တည်မှုသည် ဇယား၏အင်္ဂါရပ်မဟုတ်သော်လည်း စားပွဲနှင့်ပတ်သက်သော ငြင်းခုံမှုတစ်ခု  တကယ်တော့၊ အထက်ဖော်ပြပါ အင်္ဂါရပ်များထက် ဇယားတစ်ခုကဲ့သို့ အရာတစ်ခု ရှိသည်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏ ပြောကြားချက်မှာ ဇယားရှိနေသည့် ကြေငြာချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်းနှင့် ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်သာမက ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ဇယားသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်ခုမဟုတ်သော ကြေငြာချက်ပင်သည် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖော်ပြချက် သို့မဟုတ် အင်္ဂါရပ်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ သူ့အထင်နဲ့ သူ့အရည်အချင်းတွေကို မဟုတ်ဘဲ ချစ်သူရဲ့အရိုးဘက်ကို လှည့်သွားတယ်လို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ စရိုက်လက္ခဏာများသည် သူနှင့်တွေ့ဆုံရန် နည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် အချစ်သည် စရိုက်များကို ပိုင်ဆိုင်သူထံသို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး စရိုက်လက္ခဏာများဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားသောကြောင့် စရိုက်များ တစ်နည်းနည်းနှင့် ပြောင်းလဲသွားလျှင်ပင် ရှင်သန်နိုင်သည်။ Pirkei Avot မှာ ပညာရှိတွေ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာကိုမှမမူတည်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေအားလုံးဟာ ပျက်ပြယ်ပြီး ပျက်ပြယ်တဲ့အချစ်တွေပါ။”
နိုင်ငံခြားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းအတွက် နောက်ထပ် ရှင်းလင်းချက်
ဤပုံသည် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းအပေါ် နောက်ထပ် အလင်းပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါရရှာ၌ (ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါမည်) တိုရာသည် တိုင်းတစ်ပါးအလုပ်သမားတားမြစ်ချက်ကို သက်တမ်းရှည်စေသည်။ Haftarah (Isaiah အခန်းကြီး M) သည် ဘုရားသခင်၏ပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်သော ၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်တွင်လည်း ဖြစ်သည်-
Nhmo Nhmo Ami Iamr your Gd: Dbro အသည်းကွဲသော Iroslm နှင့် Krao Alih Ci ထွက်လာသော Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole စာဖတ်သူ တောကန္တာရ Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Clah Iso Mount and Lalhino နှင့် Hih Hakb Lmisor နှင့် Hrcsim Lbkah : Virtzer Majeker - အိပ်ခန်းပေါ်တွင် သူ့ကိုသတ်ရန် Nadshading Irah Bzrao Ikbtz Tlaim နှင့် Bhiko Isa Alot Inhl- S. Who Mdd Bsalo water and Smim Bzrt Tcn and Cl Bsls Afr earth and Skl Bfls Hrim and Gbaot Bmaznim- လေတိုက်ရာတွင် Ikok နှင့် Ais Atzto Iodiano: Whom Idhoh and Barznim Msft နှင့် Ilmdho ပညာနှင့် Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli and Cshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: Lbnon တွင် Di Bar နှင့် Hito တွင် Di Aolh မရှိပါ။ S Cl Hgoim Cain Ngdo Mafs နှင့် Tho Nhsbo ၊ Al Who Tdmion နတ်ဘုရား နှင့် Mh Dmot Tarco : Hfsl Nsc ပန်းထိမ်သမား နှင့် Tzrf Bzhb Irkano နှင့် Rtkot ငွေပန်းထိမ် - Hmscn ကမ္ဘာသို့ သွားရမည့် အချိန်ကောင်း Th Cdk ကောင်းကင်နှင့် Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti land Ctho Ash: ဒေါသ Bl Ntao အမျက် Bl Zrao အမျက် Bl Srs Bartz Gzam Same to Nsf Bhm and Ibso and Sarh Cks Tsam: S. Al Who Tdmioni and Asoh Iamr pholy: Aincm နှင့် Rao Who Bra ၊ ဤရွေ့ကား Hmotzia တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်အားဖြင့် လူအပေါင်းတို့အား အရေအတွက်အားဖြင့် အများစုကို ခေါ်ဝေါ်၍ လူ၏ အစွမ်းသတ္တိကို သတ္တိမရှိ၊
ဤအခန်းတွင် Gd တွင် ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိသည့်အချက်ကို ဆွေးနွေးထားသည်။ သူ့အတွက် ဇာတ်ကောင်တစ်ခုကို တည်းဖြတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရင်းနှီးသော အခြားအရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါနဲ့ မင်းသူ့ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်တုန်း။ ၎င်းကို သင်မည်သို့ရောက်ရှိနိုင်သနည်း သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ရှိနေကြောင်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ သိရှိနားလည်သနည်း။ ဤကျမ်းပိုဒ်များသည် ဉာဏ်ပညာဖြင့်သာ အဖြေပေးသည်။ သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရပြီး ထိုအရာများမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူရှိနေကြောင်းနှင့် သူသည် တန်ခိုးကြီးသည်ဟု ကောက်ချက်ချပါသည်။ သူသည် မြေ၏အဖွဲ့စည်းများကိုဖန်တီးသည် (ကမ္ဘာကိုဖန်တီးသည်) နှင့်မြေ၏စက်ဝိုင်းပေါ်တွင်ထိုင် (ပြေးသည်) ။ "Yikra နာမည်နဲ့ အားလုံးအတွက် သူတို့ရဲ့စစ်တပ်အရေအတွက်ကို သုံးစွဲသူတွေကို ဘယ်သူက ဖန်တီးခဲ့တာလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။"
ယခင်ပုဒ်မအရ Gd တွင် ပုံစံမရှိဟု ဆိုနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သိမြင်နိုင်သော လက္ခဏာများ မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို မမြင်ရသလို ၎င်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာရုံခံစားမှုကိုလည်း မခံစားရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည် (ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သော ဒဿနိကဗေဒ ဝေါဟာရတွင် ၎င်းတွင် လုပ်ဆောင်ချက်ခေါင်းစဉ်များ ရှိပြီး အရာဝတ္ထုခေါင်းစဉ်များ မပါရှိပါ)။
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် အရာတစ်ခုဆီသို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နေရသော သို့မဟုတ် တွေ့ကြုံခံစားရသော အရာတစ်ခုဆီသို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အရိုးများဆီသို့ လှည့်သွားနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ချစ်မြတ်နိုးရသူ၏ ဘွဲ့အမည်များနှင့် စရိုက်လက္ခဏာများကို ဖျန်ဖြေရန် လိုအပ်သည်။ သူတို့ကနေတစ်ဆင့် သူနဲ့တွေ့တယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ငြင်းခုံမှုများနှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး စေ့ဆော်မှုများဖြင့်သာ ရောက်ရှိနိုင်သော အရာတစ်ခုအပေါ် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြောင်း စောဒကတက်ရန် ခက်ခဲပြီး ၎င်းနှင့် တိုက်ရိုက် စူးစမ်းလေ့လာဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ ဉာဏချစ်ခြင်းမေတ္တာလမ်းကြောင်းသည် ဤနေရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လမ်းဖွင့်ထားသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။
သို့ဆိုလျှင်၊ ပါရရှာနှင့် ဟဖ်တာရတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရန် ပညတ်တော်ကို ယူဆောင်လာပါက၊ ပါရရှာနှင့် ဟဖ်တာရာတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှောင့်ယှက်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကို အတွင်းပိုင်းထည့်သွင်းတဲ့အခါ၊ သိသာထင်ရှားတဲ့နိဂုံးချုပ်ချက်ကတော့ သူ့အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဉာဏ်အမြော်အမြင်နဲ့သာ ဖြစ်သင့်ပြီး စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ လေယာဉ်ပေါ်မှာသာ ဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ အသန့်ရှင်းဆုံးနှင့် အပြည့်စုံဆုံးသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသောကြောင့် အားနည်းချက်မဟုတ်ပေ။ ဒီအချစ်က သူ့အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပေမယ့် ဒါက နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုပါပဲ။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ မမြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ထိုသို့သော စိတ်ခံစားမှုသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် ဘာမျှမရှိသောကြောင့်၊ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ ချစ်ရတဲ့သူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားသိရှိနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်မှာ မရှိပါဘူး။
နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား တားမြစ်ချက်တွင် အခြားသော အတိုင်းအတာကို ဤနေရာတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်အတွက် ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး တိုက်ရိုက်သိမြင်မှုချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားပါက၊ ထိုသူအပေါ်ထားရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ ချစ်သူကို မချစ်မနှစ်သက်သော အလယ်ဗဟိုလက္ခဏာရှိသော အရာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဗဟို။ ထို့ကြောင့် Gd သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ haftarah တွင် ၎င်းကို အတုယူရန် (မည်သည့်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်မှ) အတုယူရန် နည်းလမ်းမရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းသို့ရောက်ရှိရန် နည်းလမ်းမှာ အတွေးအခေါ်-ဉာဏ၊ ကောက်ချက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ထိုကဲ့သို့သော စရိုက်လက္ခဏာမျိုး ရှိပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများရဲ့ ဘာသာရေးခံယူချက်မှာ နိုင်ငံခြားအလုပ်က နည်းနည်းလေးပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ အေး ဘာသာရေးအလုပ်က အားနည်းချက်လို့ လူတွေက ထင်ကြပေမယ့် အဲဒါက ပိုပြီးပြည့်စုံပြီး ဖြူစင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိကြောင်း ပြသဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် များသောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရုပ်သဏ္ဍာန်အချို့တွင် တွယ်ကပ်နေသောကြောင့် ၎င်းသည် ၎င်း၏အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် နိုင်ငံခြားဝတ်ပြုမှုတို့ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပလပ်တိုနစ်၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကင်းကွာနေသင့်သည်ဟူသော စာတမ်းကို ထောက်ခံရန် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ် ငြင်းခုံရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
 Levy's amygdala ပျက်စီးသွားပါက၊ သူလုပ်ခဲ့သောအရာကို နားလည်ရန် အလွန်ခက်ခဲပြီး မဖြစ်နိုင်သည်မှာ အမှန်ပင်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဆိုင်မွန်ကို ဘာကြောင့် နာကျင်ရသလဲ ဆိုတာကို သူနားမလည်ဘူး။ ထို့ကြောင့် amygdala တွင်ဒဏ်ရာတစ်ခုသည်သူ၏လုပ်ရပ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်ခွင့်မပြုဘဲ၊ တောင်းပန်သင့်သည်ဟုမထင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါက amygdala ရဲ့ ကွဲပြားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကိစ္စမှာ အရေးမကြီးဘူးဆိုတာ နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ငြင်းခုံမှုသည် ရှိမုန်အား မညှဉ်းဆဲဘဲ နာကျင်စေကြောင်း သီအိုရီအရ နားလည်ပါက၊ ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းဆိုမှုသည် ပြီးပြည့်စုံပြီး သန့်ရှင်းပါသည်။ သူ့ခံစားချက်တွေက သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး။ နည်းပညာပိုင်းအရ ခံစားချက်မရှိရင် လုပ်ရပ်ရဲ့ လေးနက်မှုနဲ့ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သူနားမလည်နိုင်လို့ လုပ်တာဖြစ်မှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စသက်သက်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်များချသော စိတ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် စိတ်ခံစားမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်ပျက်စီးပြီး စိတ်ခံစားမှုတွေ မခံစားနိုင်တော့တဲ့ အာရုံကြော ပါရဂူတစ်ယောက်ရဲ့ TED မှာ ကြားခဲ့ရတဲ့ ဟောပြောပွဲကို အမှတ်ရမိပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို နည်းပညာအရ အတုယူတတ်အောင် သူမ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ John Nash ကဲ့သို့ (Sylvia Nasser ၏စာအုပ်၊ Wonders of Reason နှင့် နောက်လိုက်သောရုပ်ရှင်အတွက် လူသိများသည်) သည် စိတ်ကူးယဉ်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို တွေ့ကြုံခဲ့ပြီး ၎င်းကို နည်းပညာပိုင်းအရ လုံးဝလျစ်လျူရှုရန် သင်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတွေတကယ်ရှိနေတယ်လို့ သူယုံကြည်ခဲ့ပေမယ့် ဒါတွေက လှည့်စားမှုတွေပဲဆိုတာ သူသိလာရပြီး အတွေ့အကြုံက သူ့ရင်ထဲမှာ အပြည့်ရှိနေသေးပေမဲ့ သူတို့ကို လျစ်လျူရှုသင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွေးနွေးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ ထိုသို့သော သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ရပ်များသည် လူတို့ကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည်ဟု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာနာမှုစွမ်းရည်မရှိသော Levy အား ဥာဏ်ပညာနှင့်အေးစက်စွာနားလည်သဘောပေါက်ရန် (စိတ်ခံစားမှုမပါဘဲ) သင်ယူခဲ့သော Levy အား ထိခိုက်နစ်နာစေကာ ၎င်းတို့အား ကျေနပ်စေရန်အတွက် ခွင့်လွှတ်မှုကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ . ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းခံခြင်းသည် ခံစားရသူအတွက်ကဲ့သို့ပင် ခက်ခဲသည်ဟု ယူဆပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက ထိုလုပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်သူထံမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခကြေးငွေကို မကောက်ခံပါက ထိုသို့သော လုပ်ရပ်ကို တန်ဖိုးမထားသင့်ဟု စောဒကတက်နိုင်သည်။
 ဒုတိယအပိုင်းရှိ Talmudic Logic Series၊ The Platonic Character of the Talmud၊ Michael Avraham၊ Israel Belfer၊ Dov Gabay နှင့် Uri Shield၊ London 2014 တွင် ဤအရာကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ။
 ၎င်း၏အမြစ်များတွင် Maimonides က အခြားစာရင်းသွင်းသူ၏ mitzvah ထက်ကျော်လွန်၍ တစ်စုံတစ်ရာသက်တမ်းတိုးခြင်းမပြုသော mitzvot နှစ်ဆကို ခန့်အပ်ခြင်းမပြုသင့်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
 ထို့ပြင် ရင့်ကျက်မှုကို ချစ်ရန် ပညတ်တော်နှင့် မတူပါ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ကြည့်ပါ။
 ဤတရားတို့သည် ကျမ်းပြုဆရာတို့၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဒွိရိတ္တ ဟူသော ပညတ်သည် စိတ်ခံစားမှုနှင့် ပြည့်စုံသည်ရှိသော် ဤအကျင့်ကို ကျင့်သောသူသည် မိမိ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဆောင်သော သူသည်လည်း ဤအယူ၌ ပြည့်စုံ၏၊ သို့သော် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် Dauriyta mitzvah သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ခံစားချက်မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ရန် ဤနေရာတွင် Maimonides ၏ဘာသာစကားကို ငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။
 အဲဒီမှာ ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလို၊ ဒီကွာခြားချက်က Aristotelian ရဲ့ Aristotelian မှာ အရာဝတ္ထုနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုနဲ့ ပုံစံတို့ရဲ့ ခြားနားချက်နဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး Kant ရဲ့ ဒဿနမှာတော့ အရာကိုယ်နှိုက် (နိူမန) အကြား ပိုင်းခြားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မျက်စိမြင်တဲ့အတိုင်း ပြောဆိုခြင်း (the၊ ဖြစ်စဉ်)။
 Yoram Bronowski မှ ဘာသာပြန်ထားသော သဲထဲတွင် အာဂျင်တီးနားစာရေးဆရာ Borges "Ochber, Telen, Artius" ၏ ထူးချွန်သောပုံပြင်မှ ကျွန်ုပ်ပေးခဲ့သော ဥပမာများကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။
 ဘုရားသခင်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာ အယူဝါဒဆိုင်ရာ အငြင်းအခုံမှ အထောက်အထားများကို ထုတ်ယူနိုင်သည်ဟု ထိုနေရာတွင် ကျွန်ုပ်ပြသခဲ့သည်။ အရာတစ်ခု၏တည်ရှိမှုသည် သူ၏ဂုဏ်ရည်တော်ဖြစ်ပါက၊ အကြောင်းမှာ၊ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်တည်ရှိနေခြင်းကို သူ၏အယူအဆအရ သက်သေပြနိုင်သည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။ site ပေါ်ရှိ ပထမဆုံးမှတ်စုစာအုပ်တွင် ဤအငြင်းအခုံအကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးချက်ကို တွေ့ရသော်လည်း၊ အဲဒီ့မှာ ငြင်းခုံမှုဟာ အခြေအမြစ်မရှိဘူး (မလိုအပ်ရင်တောင်) ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ကွယ်လွန်သူ R. Binyamin David Levy ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ (ကော်လံ 124)
Darush၊ ငရုတ်ကောင်း၊ အစ္စရေး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ၎င်း၏သီလ (ကော်လံ ၅၂)
ကိုယ်ချစ်တဲ့မြေရဲ့ သီချင်းများ- အမိမြေသင်ခန်းစာကို အနုစိတ်ကြည့်ခြင်း (ကော်လံ 153)
16 "အချစ်အပေါ်- စိတ်ခံစားမှုနှင့် စိတ်အကြား အတွေးအမြင်များ (ကော်လံ 22)"
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် 'ဉာဏအချစ်' ဟူသည် အဘယ်နည်း။
ဒါမှ မဟုတ် ဒါက အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုဆီကို ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်မှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ရသလား၊ 'စိတ်' အားဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်က ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနားလည်ခြင်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့အရာပဲလား။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံဥပမာက အချစ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုလို့ မဆိုလိုပေမယ့် ပုံဥပမာရဲ့ အနှစ်သာရကတော့ လူဟာ အမြဲတမ်း အမှားမကင်းနိုင်ပါဘူး.. အချိန်မရွေး အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အပြုသဘောဆောင်တာ မဟုတ်ဘူး... ဒီပင်ကိုယ်က လူတစ်ကိုယ်လုံးကို အောင်နိုင်လို့ လင်းလက်နေသလား...
ကျွန်တော့်ရဲ့ ငြင်းခုံမှုက အဲဒါမဟုတ်ဘူးဗျ။ စိတ်ခံစားမှုသည် အချစ်၏ လက္ခဏာအများစုဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ မချစ်ပါ။ အချစ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်လာရင် ငါဆုံးဖြတ်တာကလွဲရင် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုသည်ကို ကျွန်ုပ် မမြင်ပါ။ Maimonides က ဒုတိယအပိုဒ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒါဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။
ငါ့တာဝန်ကို ရှင်းဖို့ ပုံဥပမာက မလာဘူးဆိုရင် အဲဒါက ဘာလဲ။ သူ့ကိုယ်သူ ဘာဖြစ်သွားလဲ လို့ ပြောပြတယ်။ သူလုပ်ရမယ့် တာဝန်က ဘာလဲဆိုတာကို ပြောပြဖို့ လာခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရဗ္ဗိသည် ရာထူးမှ ပေးသော 'မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သော အလုပ်' နှင့် 'မိဇ်ဗတ် အဟဗဟ' (Maimonides သည် Yeshuat တရားတော်နှင့် ဆက်ဆံသော) အကြား ခြားနားချက် ရှိသည် ထင်ရှားပါသည်။
Halachot Teshuvah Maimonides တွင် ဧဒင်အမည်ကို ကိုးကွယ်ရန် ယူဆောင်လာသောအရာများနှင့် ပတ်သက်သည် - အမှန်ပင် ရဗ္ဗိ၏စကားများသည် ယုံကြည်စိတ်ချစေသည်...
သို့သော် မိဿဗာဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရား၏ မေတ္တာတရားသည် လူကို အလုပ်ဖြစ်စေသော အရာနှင့် မဆက်ဆံဘဲ ပွါးများရန် တာစဥ်တည်သည် (ဟဂလိတလ် ဟူသော စကားကဲ့သို့ - တာဝန်တစ်ဝက်ကို တိုးပွားစေသော ဝမ်းမြောက်ခြင်း)။ ဖန်တီးမှုကို ရှုမှတ်ခြင်း။
လုံးဝသဘောတူတယ်။ ဤသည်မှာ အမှန်ပင် Torah နှင့် Teshuvah ၏ အခြေခံနိယာမများကြား ဆက်စပ်မှုပင်ဖြစ်သည်။ H. Teshuvah ၌မူ သမ္မာတရားကို ကျင့်ခြင်း၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းမှာ သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဲဒါနဲ့ စိတ်ခံစားမှုကြားက ဘာလဲ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် စေ့စပ်ထားသည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် တူညီသောအချစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ မူလတန်း Torah တွင် သူသည် ဖန်ဆင်းခြင်းကို ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် အချစ်သည် အောင်မြင်သည်ဟု ရေးထားသည် (ဤကား ငါပြောနေသည့် အနုအရင့်) ဖြစ်ပြီး Teshuvah ၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် အမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြထားသည်။ သူတို့သည် ငါ၏စကားများဖြစ်သည်။
ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏သဘောတရားသည် Yeshiva နှင့် Halachot Teshuvah အကြားတွင် သေချာပေါက်ကွဲပြားပါသည်။
ဤသည်မှာ အလွန်ထူးဆန်းသော ယုတ္တိဗေဒဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံရှာဖို့ အလုပ်အကြောင်းပြောရင် ပိုက်ဆံနဲ့ တစ်ခုခုဝယ်ဖို့ပြောတဲ့အခါ "ပိုက်ဆံ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါ်လာသလား။ ဒီတော့ အချစ်ကို ခံစားမိတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အချစ်ကြောင့် တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခုနဲ့ ပေါ်လာတာလဲ။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ချီးမြှောက်ခြင်း၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၏ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြား ဆက်နွယ်မှုကိုလည်း ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်သည်။ တူညီသော အယူအဆကို အသုံးပြုပါက ၎င်းသည် တူညီသော အဓိပ္ပာယ် ရှိသင့်သည်၊ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ်များကြား လုံလောက်သော ဆက်စပ်မှု အနည်းငယ် ရှိသင့်သည်။ နှစ်ခုစလုံးတွင် ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ချီးမြှောက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကွာခြားချက်မှာ မေးခွန်းဖြစ်သည်။
Halacha C ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အနည်းငယ်ကျဉ်းမြောင်းသည်။
Maimonides ၏ စကားလုံးများမှ အတွေ့အကြုံ အတိုင်းအတာကို ဖယ်ထုတ်ပြီး "Torah ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း" ဟုသာ သတိပေးသည်ဟု ပြောရန် ခက်ခဲသည်။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ၏ လေးနက်သော အတွေ့အကြုံတစ်ခုက သူ့အား အလေးထားသော ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသော အရာမှာ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းဖြစ်သည်ကို သေချာပေါက် ဖော်ပြနေပုံရသည်။ စိတ်ခံစားမှု အတွေ့အကြုံတစ်ခုက ချစ်သူကို ဗဟိုချက်ထားပြီး ခွဲခွာနေတဲ့ အချစ်ကသာ ချစ်သူကို ဗဟိုချက်မှာထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ ယူဆချက်ကို လုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ အေးစက်တဲ့ ခွဲခွာခြင်းရဲ့ အထက်အဆင့် ရှိတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်၊ ချစ်သူရဲ့ ဆန္ဒဟာ ချစ်သူရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပေါင်းစည်းလိုက်တာနဲ့ ချစ်သူရဲ့ အလိုဆန္ဒ ပြည့်စုံမှုဟာ ချစ်သူရဲ့ အလိုဆန္ဒကို ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ အပြန်အလှန် ဖြည့်ဆည်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ "အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ပါ"။ ဒီအချစ်မှာ အလယ်မှာ ချစ်ရသူ ဒါမှမဟုတ် ချစ်ရသူအကြောင်း မပြောဘဲ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ဘုံဆန္ဒတစ်ခုအကြောင်း ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ Maimonides က ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူရဲ့ ဆန္ဒကို ပြောတဲ့အခါ ဒီအကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။ သမ္မာတရားကို တောင့်တခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အမှန်တရားဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာတရားကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
1. ငါ့အတွက်တော့ ဒီလောက်ခက်ခဲပုံမပေါ်ပါဘူး။ ပုံဥပမာတွေရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ကုသမှုအပေါ် မှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။
2. ဆောင်းပါးပါ ယူဆချက်မှာ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံသည် ချစ်သူကို ဗဟိုချက်မဖြစ်စေဘဲ၊ ၎င်းတွင် အများအားဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော အတိုင်းအတာ (ပါဝင်ပတ်သက်သည်) ဟု ယူဆပါသည်။
ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ပေါင်းသင်းမှုကိစ္စသည် ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်ခက်ခဲပြီး အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ စိတ္တဇနှင့် မထိတွေ့နိုင်သော အရာဝတ္ထုဆီသို့ ၎င်းအား လက်တွေ့ကျသည်ဟု မထင်ပါ။
4. သမ္မာတရားသည် မှန်ကန်သောကြောင့် ကျင့်ခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက် မဟုတ်သော်ငြားလည်း စင်စစ်အားဖြင့် တူညီသည် မဟုတ်ပေ။ Maimonides က ဒါကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဖော်ထုတ်ပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး တွေးစရာပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Maimonides ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် 'အနည်းငယ် စိတ်ဆင်းရဲခြင်း' မျှသာမဟုတ်၊ ကြီးစွာသော အရေးတကြီးပင်မဟုတ်၊ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းစွာ ပုံပျက်ခြင်း (ခွင့်လွှတ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။ Maimonides သည် စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကို ဖော်ပြရန် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ကင်းကွာနေသေးသည်ဟု (သင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း) ပြောရန် သူ့ကို တွန်းအားပေးခဲ့သည် [ပြီး ပုံဥပမာများနှင့် ပတ်သက်သည့် 'ကျရှုံးခြင်း' ဆိုင်ရာ မှတ်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ လုံးဝယုံကြည်စရာမရှိပါ။ အကြောင်းမှာ ဤနေရာတွင် ပုံဥပမာများကို လျစ်လျူရှုရုံမျှမက] အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။
စိတ်ခံစားမှု၏ အနှစ်သာရနှင့်ပတ်သက်သော ယေဘူယျမေးခွန်းအတွက် စိတ်ခံစားမှုတိုင်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိမြင်မှုအချို့၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ မြွေကြောက်ရခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိဥာဏ်မှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်သည် မြွေနှင့်ကစားရန် မကြောက်ပါ။
ထို့ကြောင့် စိတ်ခံစားမှုသည် ဗီဇတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုခြင်းသည် မမှန်ပါ။ ခံယူချက်အချို့ကြောင့် အသက်ဝင်လာသော ဗီဇတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်မပျက်စီးဘဲ အခြားသူအား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက် သူ့တွင် စိတ်ခံစားမှုများ မဖြစ်ပေါ်ဘဲ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ခံယူချက် ချို့ယွင်းသွားကြောင်း ထင်ရှားသည်။
ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒါဟာ Maimonides ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားကို လူတစ်ဦး၏ အသိဥာဏ်များ တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ သူ၏နှလုံးသားထဲတွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခံစားချက်များ တိုးပွားလာသည်။ အခန်းကြီး (Halacha XNUMX) တွင် နောက်ပိုင်းတွင် အရာများ ရှင်းသွားသည်ဟု ထင်ရသည်။
ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ချည်နှောင်မထားဘူးဆိုတာ သိပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ - လို့ မိန့်မှာခဲ့တဲ့အတိုင်း 'စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ သူမမှတပါး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရာအားလုံးကို ထားရစ်ခဲ့သမျှ ကာလပတ်လုံး သူအမြဲတမ်း မှန်ကန်စွာ အောင်မြင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရာအားလုံးကို ထားခဲ့သည်တိုင်အောင်၊ '- ဒါပေမယ့် သူ့အမြင်နဲ့သူ သိတယ်။ နည်းနည်းလေး များရင် အများကြီး အချစ်ရှိမယ်” ဟု ထင်မြင်ချက် အရ သိရသည်။
ဤနေရာတွင် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါ- a. အချစ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပါ။
ခ Torah ၌ရှိသော ပညတ်တော်သည် စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆိုင်ပါသည်။
တတိယ။ ဒီစိတ်က စိတ်ရဲ့ ရလဒ်ကြောင့်၊
ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရန် ပညတ်တော်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်၌ ပွားများရန် ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် Maimonides ၏ စကားလုံးများကို ကျွန်ုပ် မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ဝိညာဏ်ဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုတာ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်တွင် ရပ်တည်ခဲ့သော B နှင့် C အကြား ဆက်နွယ်မှုကိုလည်း သင် လျစ်လျူရှုပါသည်။
ဒါတွေအားလုံးအပြင် မင်းရဲ့စကားအရ ငါမှာ ပြဿနာမရှိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မင်းရဲ့နည်းလမ်းမှာတောင် ငါတို့မှာ ရှိနေတဲ့ တာဝန်က သိမှုအလုပ်၊ သိဖို့၊ သိဖို့၊ စိတ်ခံစားမှုကို မဟုတ်ဘဲနဲ့ လုပ်နေတုန်းပဲ။ ရလဒ်အဖြစ် ဖန်တီးလျှင် ခံစားမှုသည် ဖန်တီးလိမ့်မည်၊ မဟုတ်ပါက- မဖြစ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ အဆုံးတွင် စိတ်ခံစားမှု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် သင်ယူမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထဲတွင်ရှိပြီး စိတ်ခံစားမှုသည် ရလဒ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဆို မင်းကမ်းလှမ်းချက်နဲ့ ငါရေးထားတာက ဘာကွာသလဲ။
ဦးနှောက်ပျက်စီးပြီး မချစ်နိုင်သူအတွက် CPM။ ထိုသို့သောလူသည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို မစောင့်ထိန်းနိုင်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ငါ့အမြင်တော့ ဟုတ်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ရမ်ဘမ်မှာ မေးထားတဲ့ ဟာလခကို ကိုးကားပြီးပြီဆိုရင် ဘာကြောင့် နှောက်ယှက်တာလဲ။ ဤသည်မှာ ဘာသာစကားအပြည့်အစုံဖြစ်သည်-
မြတ်စွာဘုရားသည် မြတ်စွာဘုရားအား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ မြဲမြံစွာ ပြည့်စုံသည်မှတစ်ပါး ဤလောက၌ ရှိသမျှကို စွန့်ပယ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်နှလုံး၌ ချည်နှောင်ခြင်း မရှိသည်ကို သိ၍ ထင်ရှား ထင်ရှား၏၊ များစွာသောထို့ကြောင့် လူသားသည် တိုရာ၏အခြေခံနိယာမများတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အတိုင်း လူသားတို့နားလည်သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းအားအဖြစ် သူ၏ cono ကို အသိပေးသည့် ဉာဏ်ပညာနှင့် ဉာဏ်ပညာဖြင့် အတူတကွ နားလည်ပြီး ပညာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါက ထင်မြင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပါတယ်။ အများစုမှာ စိတ်ခံစားမှုသည် စိတ်၏ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်း၏တာဝန်မှာ စိတ်ခံစားမှုပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ စိတ်၌သာဖြစ်သည်။ နှင့် NPM သည် ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေသည်။
ထိုနေရာ၌ အောင်မြင်ရန် အရှင်ဘုရား၏ စကားဖြင့် အဆုံးမသတ်နိုင်သည်မှာ အဘယ်နည်း။
သိပြီးပြတ်သားသော အရာ စသည်တို့ကို၊ AA သည် အဘယ့်ကြောင့် ဦးတည်ရာဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို မိုက်မဲသောကဗျာတစ်ပုဒ်၏ဘာသာစကားကို ဒေးဗစ်ဘာသာစကားဖြင့် နှစ်ပိုင်းပြန်ဆိုကြပြီး၊ သူမ၏အချစ်အတွက် အခြားကိစ္စမှာ သင်ပေးဆပ်မည်မဟုတ်သော သင့်ကိစ္စများတွင် အောင်မြင်လာမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအာရုံစိုက်
1. ငါ့အမြင်အရတော့ 'လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့' ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အသိစိတ်ထက် စိတ်ခံစားမှုအတွက် ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။
2. B နှင့် C အကြား ဆက်နွယ်မှုသည် အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးတရားဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်သည် ချစ်ခြင်းသို့ ဦးတည်သည်။ အချစ်သည် အလုပ်ကို နာမည်ပေးသည် (အချစ်မဟုတ်သော်လည်း 'အချစ်မှအလုပ်'၊ ဆိုလိုသည်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ ပေါက်ဖွားလာသော အလုပ်)။
Maimonides ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များတွင် Seder သည် အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သည် - သူ၏ ဘာသာရပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ ပညတ်တော်မဟုတ် (၎င်းသည် Torah ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များတွင် ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်)၊ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်နှင့် မြတ်သောအလုပ်ကို ရှင်းပြရန် ကြွလာသောအခါ၊ သူသည် ၎င်း၏ ဇာတ်ကောင် (အမည်-II) နှင့် ၎င်း၏ အရင်းအမြစ်ကို ရှင်းပြပြီး နောက်မှ ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့ ရောက်ရှိပုံကို ရှင်းပြသည် (Da'at - HV)။
Halacha XNUMX ၏အဆုံးတွင် Maimonides ၏စကားဖြင့်ဤအရာကိုရှင်းပြထားသည်- "ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောအခါ၊ ပညတ်တော်အားလုံးကို မေတ္တာဖြင့်ချက်ချင်းထုတ်တော်မူမည်။" ထို့နောက် Halacha C တွင် သင့်လျော်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ရှင်းပြသည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားလုံးများကြား ခြားနားချက်သည် အလွန်ကြီးမားသည်။ ငါ့အမြင်အရ၊ မစ်ဇ်ဗားကို စောင့်ထိန်းခြင်းမှာ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်ခံစားမှုသည် အလွန်ဗဟိုဖြစ်ပြီး အချို့သော မဖြစ်စလောက်နှင့် မလိုအပ်သော ထုတ်ကုန်မျိုး မဟုတ်ပါ။ 'ပလပ်တနစ်' နှင့် ကင်းကွာနေသော 'ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်း' ကို စောင့်ထိန်းသူသည် မိဿဟာရကို မစောင့်ရှောက်ပေ။ amygdala တွင်ပျက်စီးပါကရိုးရှင်းစွာမုဒိမ်းကျင့်သည်။
4. Maimonides ၏ဘာသာစကားဆက်နွှယ်မှုမှကိုးကားချက်ကိုကျွန်တော်နားမလည်ပါ။
(“မြတ်စွာဘုရားကို မချစ်ဘူး [ထင်မြင်ယူဆချက်…]” ဟူသော စကားလုံးသည် ဖရန့်ကယ်လ် စာစောင်တွင် မပေါ်သေးသောကြောင့် ၎င်းတို့အား ကိုးကား၍ အဓိပ္ပါယ်တူပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” ဟူသော စကားသည် ပုံစံများအတိုင်းပင်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရန်သာဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင်လည်း အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်)
1. ကောင်းတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တကယ်မသေချာပါဘူး။၂။ ဒါကို အားလုံးသဘောတူပါတယ်။ အချစ်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ မထင်မိပေမယ့် သိမြင်နားလည်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက် အမှန်တရားတစ်ခုမို့ အမှန်တရားကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ (အချစ်ရဲ့ ခံစားချက်က မလိုအပ်ဘဲ တွဲနေနိုင်ပါတယ်။ အရင်ပို့စ်ကို ကြည့်ပါ)။
3. ဒါနဲ့ သူ့ဘာသာသူ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုအတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ဘာကြောင့် အဖွဲ့ဖွဲ့ခိုင်းတာလဲ လို့ ဆက်မေးတယ်။ အများစုမှာ အသိပညာနှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနောက်မှ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (ယုံကြည်သူသည် မင်္ဂလာရှိစေသည်) သည် သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ညွှန်ပြချက် အများစုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ပျက်စီးသော သူသည် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း မပြု၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဤလက္ခဏာမရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သိပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
4. Maimonides ၏ဘာသာစကား၏အဆက်အစပ်မှကိုးကားချက်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သိခြင်းကြားကခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအကြောင်းပြောသည် သို့မဟုတ် အများစုမှာ အချစ်သည် သိခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်တည်ချက်များကို လုံလောက်စွာ ရှင်းလင်းပြီးပြီဟု ယူဆပါသည်။
သင်၏ ထပ်တလဲလဲမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်သည်- အရာများသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ခံစားဖို့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို မှာထားတယ်။ ဟုတ်တယ်!
ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အမြင်ပွားဖို့။
ပညာရှင်စတိုင်- မစ်ဇ်ဗား- စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ မစ်ဇ်ဗာ- သဘောထား များပြားခြင်း။
(အချို့သော mitzvos နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရှင်ဘုရား Solovitchik ၏ စကားသည် ကျော်ကြားသည်- ဆုတောင်းခြင်း၊
၎င်း၏ သီအိုရီအရ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လက်ခံလိုလျှင် စိတ်ခံစားမှုကို ဂရုစိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များမှမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်သာ ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အရာများသည် အလွန်နားလည်နိုင်ပြီး ရှုပ်ထွေးမှုလုံးဝမရှိပါ။
ထိုအခါ၌ စိတ်သည် မလိုအပ်သော 'အကျိုးတရား' မျှသာမဟုတ်၊
(ဤနေရာတွင် ကာမဂုဏ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဗ္ဗာ၏ ကျော်ကြားသော စကားဖြစ်သည်။
ထိုနေရာတွင် သူသည် တူညီသောနိယာမကို အသုံးပြုသည်- မင်းရဲ့အသိစိတ်က ဖြောင့်နေရင်၊
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ လောဘ ဟူသော ခံစားမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်။)
စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဉာဏ်နဲ့အညီ ပြုမူတဲ့သူဟာ အလကားလူသားသာဖြစ်တယ်၊ ဥပမာ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဉာဏ်ပညာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုမဟုတ်ပေမယ့် လူတယောက်အနေနဲ့ပဲ ပြောနိုင်တယ်၊ သူ့ခံစားချက်တွေကို တားဆီးတဲ့သူဟာ အလကားမဟုတ်တဲ့အတွက် စိတ်နဲ့မချည်နှောင်ထားတဲ့ စိတ်နဲ့ အလကားမဟုတ်တဲ့ ကျင့်တဲ့သူက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အထူးပြောလေ့ရှိတဲ့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြင့်မြတ်ဆုံး အချစ်က ခံစားချက်မို့လို့ပါပဲ။ စိတ်ခံစားမှုကို မထောက်မပေးဘဲ တစ်ဖက်သို့လှည့်သော ဉာဏ်သည် (ကိုယ့်ကိုယ်ကို) ထောက်မပေးသော်လည်း ဤဉာဏ်သည် သင့်ကိုယ်သင် ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် ထိုကိစ္စနှစ်ခုကြားတွင် အတ္တဗဟိုပြုမှု မည်ကဲ့သို့ ကွာခြားပါသနည်း။
ငါတို့စကားပြောပြီးတာနဲ့ မင်းဆွေးနွေးတာကို သဘောကျခဲ့ပြီး Halacha အရ သူ့ဘဝနေထိုင်သူဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့လူသာဖြစ်ပြီး Talmud နဲ့ Halacha ရဲ့ ထူးခြားမှုအကြောင်းတွေကို စိတ်ကူးယဉ်စိတ်ကူးတွေယူဖို့ အကြောင်းကို ရေးသင့်တယ်လို့ မင်းကိုပြောခဲ့တယ်နော်။ ၎င်းတို့ကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ။
စိတ်နှင့် စိတ်ခံစားမှုသည် တူညီသောအနေအထားဖြင့် မတူညီသော လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမှာတော့ စိတ်ခံစားချက်က ကျွန်တော့်အပေါ် တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့ ဗီဇတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆန္ဒက ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကို Freedom Science စာအုပ်တွေမှာ ရေးထားပါတယ်။ သတိပေးချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆိုဒ်မှာ ပို့စ်တစ်ခုရေးမယ်။
ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်၊ အများစုဟာ အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာ မရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့် ခံစားရပါတယ် (စိတ်ခံစားချက်နဲ့ စိတ်ကို အဓိပ္ပါယ်မဖွင့်ဆိုထားပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းပြောပြီး တွေးခေါ်မှုအကြောင်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော့်စကားတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဦးနှောက်နဲ့မဆိုင်သလို မစဉ်းစားတတ်တာကြောင့် မစဉ်းစားတတ်ဘဲ အာရုံကြောသိပ္ပံက ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက် = တွေးခေါ်မှုလို့ ယူဆပါတယ်၊ လှုပ်ရှားမှု။
26 Sivan 06 - 2019 အချိန် 20:42
စွပ်စွဲထားသောဆောင်းပါး၏နောက်အပိုင်းတွင် T.S. စတုရန်းကွင်းများကို ငါညွှန်ပြပါမည်-
“အဲဒါကတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ တွဲထားသရွေ့ ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ ကြည်နူးမှုက လုပ်ရပ်ရဲ့တန်ဖိုးကို နှောင့်ယှက်မနေပါဘူး။ သို့သော် လူတစ်ဦးသည် အပျော်အပါး ရွှင်လန်းမှုဖြင့် သင်ယူပါက၊ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုအရာများသည် မိမိသင်ယူမှုအတွက် တွန်းအားများဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် မိမိအတွက်ကြောင့် မဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒီမှာ "မှားတယ်" ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးအနှုန်းများတွင် လေ့လာမှုအား အာရုံစူးစိုက်မှုပုံစံ [= centrifugal cell] ဖြင့် မပြုလုပ်သင့်ဟု သူတို့ထင်မှတ်ထားသော အမှားမဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ သူတို့က လုံးဝမှန်တယ်။ သူတို့၏ အမှားမှာ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ တည်ရှိနေခြင်းသည် ၎င်းသည် ဗဟိုပြုမှု [= centrifugal ဆဲလ်] ဖြစ်သည် ဟု ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ချက်ကို ညွှန်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်မလိုအပ်ပါဘူး။ တခါတရံ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုသည် သင်ယူမှုရလဒ်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်များ မပါရှိပါ။
2. ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သော ကပ်လျက်ဥပဒေနှစ်ခုရှိ Rambam ရှိ "ကွဲလွဲမှု" သည် သင်နောင်မှယူဆောင်လာကာ TotoD တွင် ရှင်းပြထားသော နှင်းပွင့်၏စကားကဲ့သို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင်ဖြစ်ပုံရသည်။ ဤတွင် Maimonides သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း ဤနေရာတွင် အတိအကျပြောထားသည်။ ၎င်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းတရားနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များရှိသည်။ Torah PB ၏ အခြေခံနိယာမများတွင် သူပြောသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း ရှင်းပြသည် [သူသည် စိတ်ခံစားမှုနှင့် လေးစားမှုကို ဖော်ပြသည့်နေရာတွင် ပုံဥပမာတစ်ခုအဖြစ် လုံးဝမပေးဘဲ၊ သို့သော် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မပြနိုင်အောင် ရှင်းပြထားသည်။ အဲဒီမှာ လျှောက်ထားတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဉာဏ်ပညာနဲ့ သီလတွေကို ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရှုမှတ်ပါ။ အဖြစ်မှန်-သိစိတ်/ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်း - စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ရလဒ်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဒါလည်း ဒီမှာ သူပြောတာ အတိအကျပဲ။
26 Sivan 06 - 2019 အချိန် 20:57
1. သိပ်မှန်တယ်။ ငါပြင်တယ်။
2. ဒီမှာ ကျွန်တော် သဘောမတူဘူး။ Mahal Teshuvah အဆိုအရ ဟာလာဟ်နှစ်ခုကြားတွင် ထိုကဲ့သို့ ကွာခြားပုံမပေါ်ပါ။
'အလကားချစ်ခြင်း' - အရာဝတ္ထု၏အစိတ်အပိုင်းတွင်၎င်း၏ခေါင်းစဉ်များ၏အစိတ်အပိုင်းအပေါ်မဟုတ်ပါဘူး။
Tammuz ၏ 16 - 07 2020 ရက်နေ့ 17:39 နာရီ
ဤနေရာ၌ အဆိုပြုထားသည့် ကွဲပြားချက်မှာ အရိုးတခြမ်းပေါ်ရှိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခေါင်းစဉ်များဘက်မှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့အကြား ခြားနားချက်ကို ထောက်၍ အရှင်ဘုရား Kook မှ ဖွဲ့ဆိုထားသော 'လွတ်လပ်သောမေတ္တာ' သဘောတရားကို နားလည်နိုင်ပေသည်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဆောင်မှုတွေဟာ ဒေါသအရမ်းထွက်ပြီး သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နှိုးဆွပေးမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကို မခံစားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။
ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် 'အရိုးပေါ်၌ ချစ်ခြင်း' သာလျှင် 'B'Tselem' ၌ နှစ်သက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် 'အရိုးပေါ်၌ ချစ်ခြင်း' သို့မဟုတ် 'အရပ်၌ ယောက်ျားလေးဟုခေါ်သော ဣသ ရေလ' တို့၏ အနှစ်သက်ဆုံး ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာလျှင်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားသော ယောက်ျားလေးများ၏ နိမ့်ကျသောတာဝန်ကိုပင် 'ယောက်ျားလေးများ' ဟုပင် ခေါ်ဝေါ်နေကြဆဲဖြစ်ပြီး အများစုမှာ 'ဖေဖေသနားခြင်း' သည် သူ့သားများအတွက် တည်ရှိနေပါသည်။
သို့ရာတွင် အဆင်းရဲဆုံးအခြေအနေတွင်ပင် ဖခင်၏သားသမီးများအပေါ်ထားရှိသော မေတ္တာသည် 'လွတ်လပ်သောမေတ္တာ' မျှသာမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ဝှက်ထားတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့လည်း ကျွေးမွေးပါတယ်။ သားသမီးများတွင် ဖခင်နှင့် သူ၏လူမျိုး၌ ဖန်ဆင်းရှင်၏ ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ချက်သည် ၎င်း၏ကောင်းမြတ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် 'ဖခင်များ' ၏နှလုံးသားများသည် သားတို့ထံပြန်သွားကာ 'သားတို့၏နှလုံးသားများကို ဖခင်များထံသို့ ပြန်ပို့စေနိုင်သည်။
Bat-Galim Sha'ar (Gil-ad XNUMX ၏မိခင်) မှ 'လွတ်လပ်သောချစ်ခြင်း' အယူအဆအတွက် အသစ်ပြန်လည်တင်ပြသည့် ရှင်းလင်းချက်ကို ဤနေရာတွင် သတိပြုသင့်သည်။ သူ့အဆိုအရ 'လွတ်လပ်သောအချစ်' သည် 'သူတို့၏ကျေးဇူးကို ချစ်ခြင်း' ဖြစ်သည်။ အခြားသူများ၏ အပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်ကို ရှာဖွေခြင်း - မှေးမှိန်သွားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နှိုးဆွနိုင်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် အသက်ကို ရှူသွင်းနိုင်ပါသည်။
ပြီးတော့ Torah Rafev မှာရှိတဲ့ Breslav ရဲ့ Rabbi Nachman ရဲ့ 'ငါရှိစဉ်မှာ Elki ကို Singing to Elki' ဆိုတဲ့ 'နည်းနည်းပို' မှာ ရွှင်လန်းနေတဲ့အခါ၊ ကောင်းမှုရဲ့ မီးပွားလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုမှန်အောင်ပြောရရင်တော့ နည်းနည်းလေးမှ ဆက်စပ်နေတယ်၊ လူတွင်ကျန်နေပုံရပြီး 'အလင်းအနည်းငယ်သည် အမှောင်ထုကို တွန်းလှန်သည်'။
ရဗ္ဗိသည် ငါမခံစားနိုင်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် မက်မောခြင်းကြားက ကွာခြားချက်က ဘာလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
မေးခွန်းကို နားမလည်ခဲ့ပါ။ ဒီခံစားချက်နှစ်ခုကြားက ခြားနားချက်က ငါ့စကားနဲ့မဆိုင်ဘူး။ မတူဘူးဆိုတာ လူတိုင်းက သဘောတူတယ်။ ဒါတွေက မတူညီတဲ့ စိတ်ခံစားမှု နှစ်ခုပါ။ တဏှာသည် တစ်စုံတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်လိုသော ဆန္ဒ၊ အချစ်သည် ကျွန်ုပ်မဟုတ်သော အခြားဗဟိုချက်ဖြစ်သည် (ဗဟိုချက်မဖြစ်သော အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် တွန်းအားမဟုတ်)။ ဒီနေရာမှာ စိတ်ခံစားမှု (emotional) နဲ့ ခံယူချက် (emotional and intellectual love) ကို ပိုင်းခြားထားပါတယ်။
"သို့သော် အချစ်သည် စိတ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုသက်သက်မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းကို အမိန့်ပေးရန်နေရာရှိပါသည်။"
ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုကို နားလည်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ??? မင်းငါ့ကိုရှင်းပြပြီး ငါနားမလည်သေးရင် သဘောမတူရင် ငါ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး!
ကျန်းမာရေးကို နားလည်သော်လည်း မလုပ်ပါက ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဘုရားသခင်ကို နားလည်ရန် mitzvah ဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံး နားလည်ရန် ကြိုးစားပြီး ကြောက်မက်ဖွယ် နားမလည်ပါက မုဒိမ်းကျင့်ခံရမည် ဖြစ်သည်၊၊
ဝန်ထမ်းက ဒီကိစ္စကို နားလည်တဲ့အထိ ပြန်သုံးသပ်ရမယ်။ ယူဆချက်ကတော့ တစ်ခုခုကို နားလည်လာတဲ့အခါ သဘောကျမှာပါ။ မအောင်မြင်ရင် မုဒိမ်းကျင့်ခံရတယ်။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်အိမ်နီးနားချင်းကို ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ ချစ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းပြီး ချစ်မလဲ၊ ဒီနေရာမှာ နားလည်ဖို့ဆိုတာ ဘာလဲ။
မင်းအစ်ကိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ရမယ်။ လူဆိုသည်မှာ မိသားစုအမျိုးအစားဖြစ်သည် (မိသားစုတွင် သဘာဝဖြစ်သည်)။
အရာဝတ္တု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ၎င်း၏အရိုးများအကြောင်း ဖော်ပြခြင်းမပြုမီ ပြောကြားလိုပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စားပွဲတစ်ခုသည် "အရာများကို၎င်းပေါ်တွင်တင်နိုင်သောအရာ" ဟုပြောခြင်းသည်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းသည်၎င်း၏အရိုးများဖြစ်သည်။
ဒါ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ စားပွဲခုံတွေရဲ့ စိတ်ကူးမှာလည်း အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရင် ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် ငါ့ရှေ့မှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် စားပွဲနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒါက အင်္ဂါရပ်တစ်ခုပါပဲ။